Ø Ciidamada Gumaysiga Itoobiya oo xabsiyada u taxaabay dad badan oo ka soo laabatay Jabuuti.
Ø Shir balaadhan oo ka dhacay wadanka Australia.
Ø Eritrea oo qaabilaysa qoxootigii Oromada ahaa ee wadanka Djabuuti lagasaaray.
Ø Hayada lacagata ee aduunka ee IMFta oo Itobiya shuruudo badan ku xidhay sidii lacag dayn ah loo siin lahaa.
Ø Madaxwaynaha Eritrea oo Itoobiya u sheegay in ay u hogaansanto sharciga caalamiga ah.
Ø Shirka Soomaalida uga socda Kenya oo isku cakiran.
Ø Faalo aanu kaga hadlayno cadaawada ay Itoobiya u hayso Shacabka Soomaaliyeed iyo Suugaan halgameed.
Ciidamada Gumaysiga Itoobiya oo xabsiyada u taxaabay dad badan oo ka soo laabatay Jabuuti.
Wararka naga soo gaadhaya Xuduuda Itoobiya iyo Jabuuti ayaa sheegaya dad badan oo ka soo laabtay wadanka Jabuuti oo ay Ciidamada Itoobiya xabsiyada u taxaabeen. Sida uu u sheegay wariyaha Radio Xoriyo ee magaalada Diridhaba nin lacag madax furasho ah lagu soo daayay, oo lagu magacaabo cabdi maxamed, waxaa xabsiyada Xeryaha ciidamada ee Xuduuda Itoobiya iyo Jabuuti ku jira dad badan oo u dhashay Ogaadeenya, kuwaas oo ay qaar ka mid ah ciidamada Itoobiya u sheegeen in la sii dayn Ruuxii bixiya 500 oo Bir, halka qaar kalana lagu ee deeyay in ay ka tirsan yihiin Jabhada wadaniga Xoreeynta Ogaadenya, kuwaas oo lo gaysto buuyidhi jidhdil aad u balaadhan oo ku argagax galinaya.
Dhinaca kale 4.9.03 waxay ciidamada Itoobiya ku dileen tuulada Laanjaleelo nin shacab ah oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Xaaji Biixi. Dilka ninkaas ayaa waxaa ka dhashay kacoon ay sameeyeen dadkii ku noolaa deegaankaas, waxuuna sababay in ciidamada Itoobiya halkaas lagaga dilo 3 Askari tiro badan oo shacab ahna uu ka soo gaadho dhaawac.
Shir balaadhan oo ka dhacay wadanka Australia.
Sida uu noo soo tabiyaya wariyaha Xoriyo ee wadanka Autralia Dubada Kooreeye.
waxaa 06.09 03 ka dhacay magaalada melbourne ee wadanka Australia shirwayn oo ay isugu yimaadeen jaaliyada ogadenia ee ku nool Australia, shirkaa oo qaatay waqti aad u dheer waxaa uu ahaa shir ay dumarka' Ogadenia ee golbolka victoria soo qabanqaabiyeen uguna talagaleen inay isugu keenaan dadka u dhashay Ogaadeenya ee ku nool gobolka victoria, oo ay haweenku ka dareemeen gaabis iyo kala daadsanaan, kuwaas oo ah arimo aan u adeegayn himilada ay hiigsanayso ummadda Ogaadeeniya oo ku jirta halgan adag.
Dumarka Ogaadeeniya waxay soo bandhigen dhaliilo badan oo ay u soo jeediyeen Raga ku nool gobalkan, waxaa kale oo ay soo bandhigeen jaangoyn ay ugu talogaleen in kor loogu qaado halkan qadayida xaqa ah ee shaciga Ogaadeeniya, isla markaana laga feejignaado dibindaabyada gumeysiga iyo xeeladahiisa guracan ee ah (qaybi oo xukun). waxuu shirku isku raacay in la sameeyo gudiyo soo baadha meelaha haweenku wax ka saluugayaan, isla markaana waxay gabdhaha reer ogaadeeniya balan qaadeen inay qaban doonaan shirwayne kale oo dhici doona 11 bisha soo socota ee Oktober, kaa soo lagu soo bandhigi doono war bixin ku saabsan xogtay dumarku soo ururiyeen islamarkaana lagu dooran doono gudiyo isugu dhafan rag iyo dumar oo u wada adeegi doona qadiya guud Ogaadeeniya iyo garab istaaga halganka xaqa ah ee Shacabka Ogaadeenyo ku doonayo madax banaanidiisa.
si kasta ha ahaatee waxaa hubaala in gabdhaha Ogaadeeniya ee jooga melbourne wadanka Australia ay qaadeen tallaabooyin waa weyn oo kor u qaadaya halgan shacbiga Ogadeniya ku doonayo in uu kaga hoos baxo gumaysiga Itoobiya.
Dhinaca kale waxaa Xaflad balaadhan oo lagu soo bandhigo dhaqamada wadamada Aduunka ka qayb galay Ururka Haweenka Ogaadeenya ee wadanka Jarmalka. Xafladaas oo lagu qabtay 07.09.03 Magaalada Ludwigshafan ee wadanka Jarmalka, ayaa waxay qolo walba ku soo bandhigaan waxyaabaha ay hidaha iyo dhaqanka u leeyihiin sida Cuntooyinka, Labiska iyo Ciyaaraha, halkaasna waxaa ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka oo aad loo jecleeystay ka ciyaaray koox dhaninyaro ah oo ay soo abaabuleen Ururka haweenka ee wadanka Jarmalka. Gudoomiyaha Ururka haweenka ee wadanka jarmalka Asiili Xaaji Macoow oo aan wax ka waydiinay siday u aragto kaalinta ay xafladan ka qaateen ayaa noo sheegtay in ay aad ugu qanacsantahay kaalinta ay ka qaateen bandhigaas. Xafladan ayaa ah mid Sanadiikba mar laqabto, waxayna gudoomiyuhu noo sheegtay in ay Sanad walba ka qayb galaan, aadna looga bartay dhibaatada qadiyada Ogaadeenya.
Eritrea oo qaabilaysa qoxootigii Oromada ahaa ee wadanka Djabuuti lagasaaray.
Warar aanu ka helay wakaalada wararka Ogaadeenya ayaa sheegaya in dawlada Eltria ay ogolaatay in dadka u dhashay qoomiyada Oromada ee laga celinayo wadanka jabuuti la keeni karayo wadankooda oo ay ku qaabilayaan, warkaasna waxaa xaqiijiyay hogaanka Arimaha Dibada ee Jabhada Xoreeynta Oromiya.
Ururka Oromada ayaa waxa uu ka codasaday hayada arimaha qaxootiga aduunka u qaabilsan ee UNHCR in aan dadkaas faraha loo galin dawlada wayaanaha ee Itoobiya, ee gacan lagu siiyo sidii ay u gaadhi lahaayeen goobaha ay ku amaan helayaan ee wadamada dariska ah.
Warku waxa u intaa ku daray in ay Jaaliyda Oromada ee Canada warqad balaadhan oo cabasho ah u qoreen midowga reer Yurub, warqadaas oo ay kaga codsadeen sidii xal dagdag loogu heli lahaa dadkaas dhibaataysan.
Hayada lacagata ee aduunka ee IMFta oo Itobiya shuruudo badan ku xidhay sidii lacag dayn ah loo siin lahaa.
war uu noo soo diray wariyaha Radio Xoriyo ee magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in ay Hay, ada Lacagta Aduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano IMF u diiday dawlada Itoobiya lacag dayn ah oo ay dalbatay. Diidmada Lacagtaas ayaa waxay ka danbaysay markii ay dawlada Itoobiya ka soo bixi wayday shuruudihii laga doonayay in ay soo buuxiso. Shuruudahaas ayay hay,adu ku sheegtay in ay mahiim u tahay horumarka Bulshada soo koraysa ee Aduunka.
wararku waxay intaas ku darayaan in ayna dawlada Itoobiya wax horumar ah oo dhinaca dhaqaalaha samaynin sanadihii ugu danbayay, taassina waxay keentay in ay ku kalsoonaan waydo Ha,ada Lacagta Aduunku Xukuumada Itoobiya.
Madaxwaynaha Eritrea oo Itoobiya u sheegay in ay u hogaansanto sharciga caalamiga ah.
Waraysu u Tvga Yuni la yidhaahdo la yeeshay madaxwayne wadanka Eritrea Isayasa Afwirk ayaa madaxwaynuhu ku sheegay in ay dawlada Itoobiya runta aaminto oo ay si habsami ah u isticmaasho dakadaha wadamada dariska la ah, oo ayna isku dayin in ay xoog military isticmaasho. Waxaa la wada ogsoonyahay in ayna 14 dawladood oo qaarada Afika ka tirsani lahayn dakad ay wax uga soo dagaan, dakadaha oo ka qayb qaata horumarka wadamada.
Madaxwaynuhu waxa uu intaa raaciyay in ayna dawlada Itoobiya lahayn dakado oo ay dakadaha Eritrea uun isicmaali jireen. Waxa lawada ogsoonyahay in ay dawlada Itoobiya soo weerartay wadanka Eritrea iyadoo sheeganaysa in ay dagmada Badame leedahay, laakiin in ay Badame wadanka Eritrea ka tirsantahay caalamka ayaa u xaqiijiyay, taasuna waxay keentay in aanu kaga guulaysano siyaasada Itoobiya ee xooga ku dhisan.
Waxa uu Mr.Isayaas hadalkiisii ku soo gabo gabeeyay waxa wanaagsan in ay dawlada Itoobiya u hogaansato sharciga caalamiga ah oo ay arintu sida ay gudida soohdinta caalamiga ahi soo go’aamiyeen ku dhamaato, oo ayna mar labaad isku dayin in u dagaal na dhex maro, kaas oo keeni kara in ay dad badani ku dhamaadaan.
Shirka Soomaalida uga socda Kenya oo isku cakiran.
Sida aanu ka soo xiganay Shabakada Internetka ee Qoraxay Online shirkii soomaalida uga socday duleedka magaalada Nairobi ayaa waxuu marayaa marxalad qalafsan oo laysku mari layahay.
Ismariwaagan ayaa waxuu ka danbeeyay, kadib markay kooxaha Soomaaliyeed ee halkaas ku shirsan isku afgaran waayeen qodobka 19aad oo qeexaya qaabka ay u shaqaynayaan maamul Goboleedyada iyo awoodoodu sida ay noqonayso. Wakiilka wadanka Kenya ahna godoomiyaha shirka ayaa soo jeediyay in qodobkaas la hor keeno ka qaybgalayaasha shirka, kadibna cod loo qaado si dhinaca codku u bato loo raaco. Dhinaca kalana waxaa Magaalada Nairobi soo gaadhay Wafti uu hogaaminayo nin jeneraal ah oo ay Itoobiya u soo dirsatay in uu u soo kuurgalo arimaha shirka iyo in uu soo xaliyo khilaaf kulul oo soo kala dhex galay kooxaha gacansaarka la leh ee SRRC. Khilaafkan ayaa lasheegayaa in uu ka dhashay kulan ay lahaayeen Golaha SRRC oo ka doodayay sidii ay u wajihi lahaayeen Qodobka 19aad waxaana isku af dhaafay Wakiilka xuseen caydiid Naaleey iyo Co. C/Yuusuf. Si kastaba ha noqotee waftigan Itoobiya ka socda ayaan lagaranayn si ay u xalin doonaan khilaafkan ba,an ee soo kala dhexgay kooxdooda.